Tselatra · Jolay, 2008 · Global Voices teny Malagasy
Tselatra · Jolay, 2008
Tantara tamin'ny Tselatra tamin'ny Jolay, 2008
“Liana dia liana amin'ny fizotry ny fifidianana Amerikana i Chris ao amin'ny Dominica Weekly , ary mitarika azyizany hitodika amin'ny toetoetran'ny politika ao an-tanindrazany: “Angamba ny zavatra mahomby indrindra azontsika atao dia ny milaza ny marina amin'ny manampahefana, midradradradra izay ilaintsika, mitaky ny zo sasantsasany, tahaka ny fitsaboana, fahampiantsakafo, ary fialofana ho an'ny rehetra.”
Malahelo dia malahelo tokoa i Anabela Quelhas [pt] eo ampanatrehana ny fandravana ny tsenan'i Kinaxixe ao Luanda. Tanisainy ny antony folo anamarihany fa fanorenana manana ny maritrano mampiavaka ny taona 1950 sy manandanja ho an'ny mponina io fanorenana io, ary nofeheziny fa : “Mbola maivandanja eo anatrehan'ny vola sy ny varotra indray ny tahirin-kolontsaina”. Foibem-barotra maoderina vao vao indray manko no hatsangana eo amin'io toerana io ihany.
Emeka no manoratra orinasa iray mampiely amin'izao tontolo izao ny tsironkanina sy ny nahandro Afirikana : “Natsangan'ilay efa nahazo ny loka manokana Felicia Twumasi, (ny orinasa mamokatra) sakafo araka ny fomba Homefoods (vita an-trano), voafono avy amin'ny ravim-boanio mena fanaova-menaka, ny Episy (fanatsarana tsiron-kanina) Afirikana tonga lafatra, mangahazo voatoto, saosy mafana vita amin'ny shito ary voankazo masa-tsiramamy (kaofitora fa tsy kaofiboay).”
Fitsinjovana ataona Nairobiana mba te-hahita Famahanam-bolongana ataon'ny efa malaza eto Afirika:Fifaninana izy io ary mitaky tetipanorona tsara omana, maniry te-hahita sokajy manokana ho an'ny bolongana Afirikana ho azy ireny aho, etsy ankilan'izany dia handray ny ohatra tsara ka hanao fifaninanana ho antsika isika! Misy ve ny hanolotena hanohana ho amin'ny fifaninanan'ny olo-malaza'ny famahanam-bolongana ho an'i Afirika?????”
30 Jolay 2008
Custódio Duma [pt] no mitondra vaovao ho antsika fa nentina haingana tany amin'ny hopitaly any Afrika Atsimo ny minisitry ny fiarovana Mozambikana Filipe Nyussi raha tapaka nandritra ny lozam-pifamoivoizana ny tanany. “Reko ny filazan'ny minisitry ny fahasalamana tao amin'ny RDP Africa tamin'ny herinandro fa manaraka ny fenitra iraisam-pirenena ny Hopitaly lehiben'i Maputo… koa nahoana moa no tsy mba ampidirina ao amin'io hopitaly io mihitsy ny mpitondrantsika?”
29 Jolay 2008
Navoakan'i Walter Valdevino tao amin'ny Nova Corja [pt] ny sarim-pihetsiketseham-panoherana hafakely tao Barezila, raha nizotra ho eny afovoan-tanànan'i Rio de Janeiro tsy misy tatinono ity vehivavy aritista 28 taona iray. “Silipo kely ihany no mba fitafiana nentiny, nandeha 15 metatra nisikina ny sainam-pirenena Bareziliana hanakona ny fitombenany ity mpirotsaka hifaninana ho Miss Flamengo ity ary nandray fiarakaretsaka avy eo, ka nampihoraka hakiviana ny kaofiboay teo akaiky teo”. Ho fanoherana ny hanohanana, tsy rariny ary ny fampanantenana poakaty ataon'ny mpanao politika no nanaovany izany.
Mpanoratra Jennifer Brea Nandika Andriamifidisoa Zo
[Tsikin'ny mpandika teny: Tsy vola maditra tsy akory no lazaina fa vola navilivilin'ny sasany] Tany Congo, Nomelohin'ny fiadidiana ny praiminisitra ny sampan-draharaham-panjakana folo any aminy, ary tafiditra amin'izany fanodikodinam-bola mahatratra 1.3 miliara dôlara izany ny sampan-draharaha mpitaky hetra sy haba isan-karazany, ny JIRAMA kongoley ary ny fiantohana, hoy ny tatitry Forum Realisance [Fr] avy amin'i Le Potential.
27 Jolay 2008
Mpanoratra Vilhelm Konnander Nandika Andriamifidisoa Zo
26 Jolay 2008
Living Guyana no mitatitra fa mikasa ny handrara ny filazana na fampielezana ny fanameloha aho faty ny Filoha Goianey satria “ratsy loatra ny mandre azy ka manao izay mampalahelo ny olona ihany koa”, Tonga moa dia nanamarika i MediaCritic hoe: “Tsy mbola hita mihitsy izay paikady mazava entina miady amin'ny fitombon'ny fanaovan-keloka eto Goiana.” GT…Keep It Real indray manapololotra ny : “Fa hampakatra ny fari-piainan'ny ANTITRA ve ny Presi sa haninona eee?”
“Firifiry ny isan'ny misolelaka any amin'ny fitondrana Siriana (manohitra an'Isiraely) mandritra ny herinandro? Ny valiny: feno. Koa miangavy re: teneno ny fitondrana Siriana tsy hiteny amin'ny anaran'ny Arabo manontolo raha mampanantena fandriampahalemana sy mandrindra fihavanana amin'Isiraely izy. Ary tsarovy ihany koa fa efa nampanantena toy izany i Sadat (filoha eziptiana taloha nisy namono) tamin'ny androny,” hoy ilay Libaney Dr As'ad Abu Khalil ao amin'ny The Angry Arab News Service.
White African no miady hevitra momba ny fitatera-baovao (mifindrafindra) any Afirika, “Ny (orinasa ) avy any Pays-Bas AfricaNews no mpitari-dalana amin'ity sehatra ity, raha nanomboka tamin'ny herintaona tao amin'ny tranonkalany ny “Voices of Africa” (Feon'i Afirika). Tsy mitsahatra ny sondriana aho amin'ny fahitany, fanazarany ary fanomezany fitaovana ny mpanao gazetiny manerana an'i Afirika.”
Chernobyl and Eastern Europe no nanoratra fa “Mpampianatra 3 avy any Texas sy mpianatra Irakiana 27 no manao fanazarantena amin'ny fomba fanadiovana manala sisantaratra mampididoza” nandritra ny volana jona lasa teo tany Pripyat (Ukraine): “Eny, zavatra mahaliana azo atao amin'i Pripyat – ny fanazarana ny Irakiana ny tekinikam-panadiovana ny tanàna izay tsy vitan'ny mpitondra tanteraka nandritra ny 23 taona lasa izao. Fa raha tsy izany, efa hitan'ny Irakiana aloha hoe ahoana moa no mety hahazo ny tanànany aoriana kely ao [raha tsy ampy ny fitandremana].”
Mpanoratra John Kennedy Nandika Andriamifidisoa Zo
Nanomboka namoaka Bolongatsary Letoniana (Latvia photoblog) i Arnis Balcus : “Te-hampiranty izay hitako aho satria matetika heverina ho azo alaina maimaipoana ny zava-mahaliana ahy ary tsy mba tsikaritra loatra ihany koa. Eny, zavabitika tokoa ireo fa mbola hanjavona indray andro any, ary tahaka izany ny fanorenana sy ny rafitrano tamin'ny andro sovietika izay niserana ihany. Fa nalaiko (sary) ihany izy ireny ho tahiry satria omentsika lanaja ny zavatra iray rehefa tsy eo intsony.”